Kana iwe uine bhizinesi duku uye unoda kuwana huwandu hwekutungamira, iwe unofanirwa kunge uchitarisa-up yako permainan pemasaran Twitter. Na zvinopfuura 300 mamiriyoni anoshingaira pamwedzi vanoshandisa, iyo ichakupa iwe usingaenzanisikwi ruvoko rwekugadzira mararamiro ako kumagariro evanhu.
2 Twitter untuk Penjanaan Lead
3.2 2. Inzwisise kuti sei sembang Twitter inoshanda
3.3 3. Iva we Twitter-savvy apo uchibvunza mibvunzo
4 Jadual Sembang Twitter
4.2 2. #SosialROI
Twitter untuk Penjanaan Lead
Chimiro chayo chakasununguka chinokwezva vazhinji vevatori vechikamu vari munharaunda yavo. Nokupinda mumisangano yakasiyana, unogona kupinda mukutaura nevanhu vakakosha uye vanokurudzira vanogona kukubatsira kukura bhizinesi rako. Uyezve, nekugadzirira kukurukurirana, unogona kugadzira mararamiro pamusoro pe Twitter nekukwevera vamwe vatengi zvakare.
Hapana chakakunetsa pamusoro pekuti iwe hauna kutora mukana wekutaura ne Twitter kare. Nokutevera mafungiro aya anofungisisa, iwe unenge uri pro pa Twitter chat dalam masa yang singkat.
Pane zvakawanda zvekushandisa uye kutaurira mazita kunze uko izvo zvingakubatsira iwe kutsvaga sangano rinouya. Zvimwe zvemasikirwo anozivikanwa ndiwo Twubs, The Chat Diaries, uye Chat Salad.
Uyezve, iwe unogona kushandisa nguva dzose rubatsiro rwe Twitter Pencarian Lanjutan kutarisa kumusoro kwekutaura kwakakosha. Yakafambira mberi tsvakurudzo inogona kukubatsira kutarisa machechi ari kutorwa nevatambi vanotungamirira. Iwe unokwanisa kutsanangura mamwe mazita e-akhawunti mu "Orang ramai" chikamu chekutsvaga zvigumisiro zvako.
Tangkapan Skrin Carian Lanjutan Twitter
Zvakanaka, iwe unofanira kutanga nokupa mazwi anokosha mumutsara kita "Perkataan" wekutsvaga kwekutsvaga. Pujuk mekunge, iwe unogona kungoita zvigadziriswe zvishoma kuti uwane migumisiro yakakosha. Shandisai dzimwe dzenguva dzinofadza zvikuru dzekutaurirana uye uzviwedzere kukerenda yako kuitira kuti zvinhu zvitange.
2. Inzwisise kuti sei sembang Twitter inoshanda
Cendawan mokuzivisa zviitiko zvishomanana zvinouya kuGoogle, usangomhanyira muzvinhu. Tanga nekucherechedza dinamika dzinobatanidzwa munyaya ipi ye Twitter.
Iwe unogona kusangana nemakambani mashomanana akachengetwa zvakanaka pane izvi zvakare. Edza kuvhara mukati uye kutsvaga zvinokonzera kukurudzira zvine chokuita nekambani yako. Uyu mutungamiri panzvimbo yangu ichakubatsira iwe kunzwisisa nzira yekutora nhengo mu Twitter sembang sembang.
Somuenzaniso, imwe yenzira dzekutora dzaunogona kuwana ndeyekuti nokungwarira hashtag inoshandiswa nevatori vechikamu vakasiyana panguva yekutaura. Isu tos tinoziva simba rehthtag pemasaran. Izvo zvave zvichicherechedzwa izvo tweets ne hashtag inenge kaviri kubatanidzwa kupfuura ma tweets anowanzosina asina hashtags.
Uyezve, sembang Twitter ndezve kwete kungosimudzira bhizimisi rako.
Ndine chokwadi chokuti cendawan mokucherechedza machechi mashomanana, iwe unonzwisisa simba rayo uye ungatanga kuvhara yako inzwi rehurukuro usati watanga kukurukura nevamwe.
3. Iva we Twitter-savvy apo uchibvunza mibvunzo
Kunyange, kana uchitaurirana nevamwe, unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unoramba uchiita izwi rako. Cendawan mezvose, ndiyo bhizinesi renyu rebhizimisi ramunomiririra. Mikana ndeyokuti vanhu vangazokubvunza nezvemakwikwi ako munguva yekutaura. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unobata mibvunzo yakadaro yakachenjera nokuchenjera.
Kana iwe usina chakanaka chekutaura pamusoro peimwe mimwe mavara, zvino chengetedza kusarerekera kwematongerwe enyika. Usatumira chero chakaipa pamusoro pevadzidzi vako paunenge uchitaura nomumwe munhu. Uyewo, usatumira chero chinhu chinokugumbura kana chinangwa chekutonga paunotumira tweet. Iva wakazvidzivirira uye edza kuwana chimwe chinhu chinobudirira kunze kwekukurukurirana kwako.
Jadual Sembang Twitter
Pano pane vashoma Twitter Chats unogona kubatana kuti uone hupe,
#VCBuzz adalah sembang Twitter mingguan oleh @seosmarty. @SanaKnightly, mutungamiriri kami #VCBuzz anopa sumo pfupi,
Vhiki imwe neimwe tine muenzi mutsva uye nheyo mutsva inosanganisira chimwe chezvinhu zvizhinji zvekutengesa internet. Vadzidzisi vedu vanogovana ruzivo rwavo, zvishandiso, mazano, zvidzidzo zvekare, nezvimwe. Mukuwedzera kune iyo #VCBuzz ine mharaunda yemusangano apo munhu wose anokwanisa kugovera pfungwa dzavo nekubvunza mibvunzo yakawanda nokuti isu tose tinoungana pano kuti tibatsirane! Kutungamira mitsva yedu yatinoshandisa http://twchat.com/ -Chinhu chepamhepo chepamhepo chakashandisirwa nzira yekuita kuti kutaura kwe Twitter kuve nyore uye kuve nyore kutevedzera.
#SocialROI ivhiki nevhiki Twitter Sembang yakabatwa na @MadalynSklar uye inotsigirwa ne @ManageFlitter. @ katefrappell- Gadzira Mutungamiri paManageFlitter, inopa mhedziso ye #SosialROI sembang:
#SocialROI yakatanga munaJanuari 2017 yePasar Media Sosial, Vatungamiri, VaMabhizimisi Vepamabhizinisi uye ManageFlitter vatengi. Hurukuro inoshumira semusangano unokosha umo nyanzvi dzemabhizimisi, vatashanyi vakasiyana uye vanopa mugove vanogoverana pfungwa dzavo nemanzwiro pamusoro pezvimwe nyaya dzine chokuita neVanhu veMagariro evanhu. Vatori vechikamu havangotauri chete kugovana ruzivo rwavo, asiwo vadzidza zvakawanda mazano uye mazano kubva kune vezera ravo.
Sertailah #SocialROI zuva rimwe nerimwe 6pm EDT / 3pm PDT.
Tarra Jackson aka @MsMadamMoney ndiyo nyanzvi inozivikanwa mune zvemari. Anopa #CashChat kukurudzira vateereri munyika yose kuti awal nehukama hwakanaka nemari yavo. Tarra inoratidzirwa # 3 kune Vakuru veMatambudziko Ekutevedza Kutevera pa Twitter.
#CashChat ndeimwe yepamusoro yevashanu vhiki imwe neimwe inopindirana yemari yemari sembang pamusoro pe Twitter. Vabatanidzwa nevashanyi rudzi rwemhinduro dzemibvunzo kubva kumubati, Tarra, achishandisa shanduko yepajw.org Twitter. Chinangwa che #CashChat ndechekubatsira vanhu kudzidza mazano uye mazano ekuvandudza kana kuwedzera mari yavo uye kukweretwa kwekwereti kwehutano hwakanaka hwehutano.
Sertailah #CashChat Vhiki yoga yoga kubva ku12pm ET.
#ChatSnap ndiyo yekutanga uye yega Twitter Sembang Semua Mengenai Snapchat. Hurukuro yakatanga musi waChris 16, 2016, uye yakarongedza zvishoma kubva kunyika kubvira muChishanu 1, ikashandisa mazana evatendi vhiki nevhiki kuzokurukura nyaya dzakapoteredza Snapchat. Kristy akakoka kune 40 + vashanyi vanokosha kuti vabatane nekutaura kwake. #ChatSnap adalah rakanyorwa naHootsuite sezvinonzi Sembang Twitter teratas untuk media sosial vatengesi kuti vatevere.
Nokuva kushamwaridzana nevamwe vanhu vane mafungiro akafanana, unogona kugovera hurukuro dzakawanda uye kuziva avo vanozotarisira vatengi nyore nyore. Paunenge uine Twitter chat, iwe unofanirwa kusarudza nyaya yakakodzera. Inofanira kuwirirana nevateereri vako uye kuvakurudzira kuti vatore chikamu muhurukuro. Izvi zvichakubatsira iwe kuumba nzvimbo yako yakasiyana pane zvekugarisana nevamwe.
Haungati iwe chete unokwanisa kuwana vthingi vakawanda pa Twitter, asi iwe uchawanawo mukana wekushandura veveri ava kune vatengi vako zvakare. Nemuenzaniso, heyi nzira yakakwana yekupinda mukutarisana nemitungamiri yako.
Bhizinesi rega rega rinoda kuvaka yavo yepamhepo nharaunda kuitira kuti ive nezvimwe zviitiko zvekuita mune ramangwana. Ita kuti vateereri vako vabatwe paunenge uchitaura navo kuburikidza nechikamu cheQ & Vashoma kana nokungotora vashanyi. Izvi zvinopa vateereri vako mukana wekutaura kune vanotungamira indasitiri nyanzvi uye kutaurirana nemumwe.
Nokuita sembang Twitter, iwe unogona zvechokwadi kupa zvinhu zvinokosha kune vateereri vako nenzira yakakurumidza uye isina maturo. Ichakubatsirawo kugadzirisa mibvunzo yavo kana kusimbisa vatsigiri vako. Heino muenzaniso wakakwana wekubatanidza nharaunda yako pamwe chete.
Sembang Twitter ichakupa chete iyo yakarurama yekukwirirana nekukwira kwema influencer. Mushure mokunge mavaziva, munogona kutamisa zvinhu mberi uye muve neukama husingaperi navo.
Iwe haugone kuva mutungamiri wekambani kana iwe usingagari wakarongedzwa nezvose zvinoenderera mberi maitiro. Yakawanda yevhiringidzi ye Twitter diobatanidza kana zvidzidzo zvemangwana kana rudzi rwemashure ari kuita zvinyorwa munguva ino.